Qodobada Vivek Sriram Martech Zone |
Maqaallada by Vivek Sriram
Kahor inta uusan ku biirin Lucidworks, Vivek wuxuu horseeday wax soo saar iyo horumarin ganacsi oo loogu talagalay ganacsiga raadinta ee Adeegyada Websaydhka Amazon, halkaas oo uu si wada jir ah uga abuuray Adeegga Elasticsearch ee Amazon wuxuuna gacan ka gaystay kobcinta ganacsiga raadinta laga bilaabo bilow ilaa baaxad weyn. 20 + sano ee uu ku jiray barnaamijka Vivek wuxuu u adeegay injineernimada, horumarinta ganacsiga, iyo doorarka wax soo saarka ee shirkado kala duwan oo ay ka mid yihiin Vizu (oo ay heshay Nielsen), Isugeynta Aqoonta (oo ay heshay Neustar), iyo SBI Razorfish.
Khamiis, Agoosto 27, 2020 Khamiista, Sebtember 17, 2020 Vivek Sriram
Raadintu waa luuqadda guud. Sanduuqa raadintu waa bogga jawaabahaaga oo dhan. Miyaad ku riyootaa gurigaaga sariir cusub oo loogu talagalay aqalkaaga? Google sariiraha jiifka ugu fiican ee guryaha yaryar. Shaqada isku dayaysa inay ka caawiso macmiilka inuu fahmo xulashooyinka ka mid noqoshada? Ka raadi boggaaga qiimaha ugu casrisan iyo faahfaahin si aad ula wadaagto. Marka ugu sarreysa waxqabadka, raadinta iyo dhirtuba waxay kor uqaadaan khadadka sare iyo hoose. Macaamiisha wax badan ayey iibsadaan oo daacad ayey ahaadaan,